Toban Ciyaartoy Oo Bayern Munich Ah Oo Barbaro Gool La’aan Ah Kala Soo Kulamay Kooxda Shakhtar Iyada Oo Xabi Alonso Kaadhka Cas Loo Taagay | Waayaha
You are here: Home 2015 February Toban Ciyaartoy Oo Bayern Munich Ah Oo Barbaro Gool La’aan Ah Kala Soo Kulamay Kooxda Shakhtar Iyada Oo Xabi Alonso Kaadhka Cas Loo Taagay
Kooxda Bayern Munich oo inta badan qaybtii danbe ku ciyaaraysay 10 ciyaartoy ayaa barbaro gool la’aan ah kala soo kulantay kooxda ree Ukrain ee Shakhtar Donetsk. inkasta oo ay Bayern Munich fursad ku haysato kulanka lugta danbe oo lagu ciyaari doono garoonkeeda Allianz Arena ayayna haddana ku soo guuldaraysatay inay wax gool marti ah soo dhashato.
Kooxda Shakhtar Donetsk ayaa markii ugu horeysay kulan tartan rasmi ah Bayern Munich lugta hore ee champions Leaque -ga la ciyaartay , waxaana ay raadinayasay inay guushii ugu horeysay kaga gaaraan gurigooda koox Bundesliga ah muddo 35 sannadood.
Kooxda FC Shakhtar Donetski ayaan ciyaarin sannadkan 2015 wax kubad ah madaama dalkooda Ukraine uu dagaal ka socdo islamarkaana horyaalka dalkooda uu ku jiro hakad. Bayern Munich oo kulankii ugu danbeeyay ee horyaalka Bundesligaha xasuuq xun u gaysatay kooxda Hamburg ayaa isku diyaarinaysay inay sii wadato qaab ciyaareedkeeda fiican. Bayern Munich ayaa ka walwalsanayd Luiz Adriano kaas oo heerkii groupyada wacdaro ka soo dhigay.
Inkasta oo ay Bayern Munich sidii hore loo saadalinaayay inta badan kubbada haysatay ayay haddana ku guuldaraysatay inay fursado badan ka abuurto kooxda Shakhtar oo aad u haybaysnayd. Ciyaartii ka dhacday garoonka shakhtar ee L’viv Arena ee dalka Ukraine ayaa qaybtii hore lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay ciyaartu ka sii adkaatay qaabkii ay ahayd qaybtii hore, wuxuuna xaalku Bayern Munich ku sii xumaaday markii daqiiqadii 65 aad kaadhka cas laga siiyay Xabi Alonso kaas oo intii ay ciyaartu socotay qaatay kaadhka labaad ee digniinta ah isla markaana ciyaarta laga saaray, intaa wixii ka danbaysayna Bayern Munich waxay ku ciyaaraysay 10 ciyaartoy.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro gool la’aan ah, waxayna Bayern qaybtii danbe ku faraxsanayn in ciyaartu ku dhamaato barbaro sababato ah waxay ku ciyaaraysay 10 ciyaartoy waxayna maanka ku haysay inay kulanka lugta danbe ku ciyaari doonto gurigeeda.